Iga gaarsiiya madaxweynaha. – Codka Dhaqdhaqaaqa Somali secular International
Waxaa Mahad balaaran mudan Teamka Anshaxa Doorshada ee uu hogaaminayay Prof Abdi Ismail Samatar.
Sidoo kale Teamka Gudiga Doorashada ee uu Hogaaminayay Dr. Bayleh.
Sharaf iyo Karaamo waxay usugnaatay labada aqal Aqalka Sare iyo Kan Barlamanka ee iyagu suurta galiyay farxadda iyo yididiilada shacabka somaliyed soo gashay. Sidoo kale waxaan mahad balaaran u jeedinayaa dhamaan intii ka shaqeysay iney sidaa wax u dhacaan.
Soomaaliya caqabadaha haystay waxaa kamid ahaa uguna liitay in muddo ahna ay adkeyd in lahelo hoggaan daacad ah, maantase rajadii dhankaa ku aadaneyd waxaa ladhihi karaa waa ay rumowday, sidaa darteed baan waxaan doonayaa inaan ku darsado talooyin dhowr ah aanse badneyn lkn aan isdhihi karo hadii lagu dhaqaaqo Somalia waxay noqon doontaaa muddo yar gudahood wadan kaga soo kabta wixii uurkutalo soomaray, horumarkana looga daydo.
Madaxweyne waxaad haysataa quluubta shacabka Somaliyed, waxaad Madax unoqotay dal iyo dad burbursanaa in muddo ah ee waxaan kaa dooneynaa ugu horeyn inaad siyaasad furfuran oo dabacsan aad kula dhaqanto Somalida oo dhan, adigoo mikrafoonka aad isticmalaysaa uu yahay caddaalad iyo run, mida dibadana Siyaasad dhexdhexaad ah kuna dhisan dhanaha ummada Somaliyeed, mid markaa taagan iyo mid mustaqbalba ku eegaya, waligaana indhahaagu iyo maankaagu ha isla shaqeeyaan, hana noqdaan kuwo aragti fog leh.
Talada kale ee muhiimka ah, danta dadka iyo dalkaba wax ka qaban karta, waa inaad hareeraahaga ku buuxisaa aqoonyahano dhalinyaro iyo cirroolayaalba leh oo wadaniyiin ah.
Waxqabadka aan is dhihi karo waa muhiiim aan laga fursan karin si kastey ahaataba, waa ku waan soo socdo:-
2. Dastuur dhamaystiran
Intaa hadii aad wax ka qabato waa hubaal ah in tallaabo weyn dhanka barwaaqa sooranta soomaaliya horey loogu qaaday.
Afartaa hadii aan isku dayo inaan sii jilciyo maadaama aan is dhihi karo waa halku dhigii NABAD IYO NOLOL baa ku dhan.
Ka hadli maayo muhiimada amnigu uu inoo leeyahay, balse sidee ku heli karnaa amni sugan oo dhidibo dhumuc leh, aysanna faragalin shisheeye wiiqi karin?
Amniga noocaa ahi waa adagyahay in waqti kooban lagu dhiso marka loo eego waddan in muddo ah burbursanaa,
ugu horeyn waa in aynu helnaaa ciidan milatri iyo ciidan dharcad ah iyo Shacab isla shaqeeya.
Ciidanka milatariga waa iney noqdaan kuwo ka dhisan Xagga aqoonta ciidan iyo aqoonta kale ee tacliinta sare, tusaale waa in laheli karaa sargaal dhaqaaleyahano, dhaqaatiir, injineero ah, iyo kuwo kaloo diinta yaqaan iyo Qaybaha Culuumta oo dhan, dhamaanna ay kawada mideysanyihiin iney wada yihiin Ciidan ushaqeynaya danta Dalka iyo Dadka.
Sidaa wadada ugu fudud oo lagu heli karo waxa ay noqoneysaa ardaykasta oo haysta shahaado jaamacadeed ama aqoo-yahankasta waa in lagu dhiiri galiyaa inuu noqdo sarkaal kana mid noqdo hogaanka ciidanka ee wadanka. Waana in dhamaan ciidanka xuquuq dheeri ah lasiiyaa.
Ciidan saraakiishiisu aqoon leeyihiin wuxuu fududanaya isfahamka iyo isdhexgalka shacabka iyo ciidanka, sidoo kale Amniga waa ku dhamaystirmaa.
Waxaa taa hareer socda qaabdhismeedka ciidanka waa in uu ka madax banaanyahay siyaasada wadanka si kale hadaan udhigo waa in uu ka madax banaanyahay xukuumada.
Taaa waxay faa’iido utahay jiritaanka amni waara iyo waddan dhisan oo hagaagsan, wadanka loogama baqayo nacas kasta inuu siduu doono kayeelo waayo Ciidankiisu waa kuwo cilmi leh ee aan xuduudaha kaliya lagu jeedin ee dareemi kara sidey wax u socdaan deg degna u ajiibi kara rabitaan shacab haduu yimaado.
2. Dastuur dhamaystiran.
Markii wax laga qabto amni xumada jirta Culayska dhankaana uu yaraado waxa ugu horeeya ee lagu xijin karo muhiimkana ah waa dastuurka oo waajibaadka Shaqo kasta ku cadahay iyo falkasta oo dambe ah ciqaabtiisa in dastuurkaas la dhamaystiro, waayo horey looguma dhaqaaqi karo garsoorka in la dhiso, sababtoo ah hadaysan jirin dastuur iyo qawaaniin uu ku shaqeeyo garsoorka qofkastana uusan ogeyn falka uu geysto ciqaabta ka dhalanaysa waxaa fududaaneysa in ay noqoto qofkii dambi sameeyaba ha yaraado ama haweynaado e’ in isku dhexyaac ku dhaco amarada kasoo baxaya qaadiyaasha, waxayna dhaawacaysaa cadaaladii umadda ay dooneysay hadii uu yimaado kala duwanaasho amarada sida habqanka kusoo baxaya.
Marka waaa muhiim in lahelo datsuur ay qawaaniintiisa iyo xeerarkiisa madaniga iyo guud ahaanba waxkastoo la xiriira shuruucda dalka soo hoos galaya u dhamaystiranyahay si looga baaqsado kala socodka looguna toosnaado waxa lagu heshiiyay markaana waxaa inoo fududaan bi’idnillaahi inaan gaarno hiigisigeena ku dhisan nabad iyo nolol waarta.
Garsoorku waa mashiinka saxa khalal-ka ku yimaado waax kamid ah laamaha dowlada ama dowlada oo dhami, waana mashiinka sifeeya xumaha oo dhan , dhan bulsho ama dhan shaqsiyaad intaba.
Waa mashiinka ugu muhiimsan ee ka ilaaliya umadda burbur ku yimaada, waa halbeega ama jiheeyaha wadada saxan utilmaamaha, umadi hadii uu garsoorkoodu hagaagsanyahay ma burburto waayo waxaa nool wali Xabagtii isu heysay.
Garsoorku ma shaqeynkaro labadii hore ee aan soo sheegnay la’aantood, waayo la’aantood wuxuu noqonayaa fadhi kudirir qoraal loo badalay ama hadal nin iska yiri cidina dhag jalaq uma siinayso, waana mida maanta ina haysata masuulkasta ama daalimkasta oo wax dulmiya uu laafyoonayo isagoon dareen cabsi aan qabin sida inuu cibaado soo gutay ulaafyoonaya, hadhowna isagoo og xumaantii uu sameeyay umadda usheegaya inuu yahay rasuul nabadeed oo umadaan barwaaqo iyo Cadaalad gaarsiinaya.
Sidaa darteed garsoor hufan in la helo waa muhiim iyadoo ay u dhanyihiin labadii hore aynu soo sheegnay si uu unoqodo mid marjic ah, halkudhigisuna waa sareysiinta awooda sharciyeed.
Garsoorku waa inuu noqdaa mid kasareeya awoodaha oo dhami ee wadanka. Garsoorka cidkasta waa iney u hogaansantaa.
Waxaan jeclastay eraygaa cadaalad inaan adeegsado intaan adeegsan ladagaalanka musuqmaasuqa iyo laaluushka, waayo kan dambe ee aanan adeegsan waa mid ku kooban xumaha meelo gooniya, lknse saameyn xun leh, adeegsiga Cadaalad ee aan adeegsaday waa eray guud oo meesha kasaaraya xumaha oo dhami, hadii la helaana aysan jireyn musuqmaasuq laaluush iyo xumaankastoo dhami ayna fududaaneyso qofkii ku kacaa musuq in la horgeynayo cadaalada.
Cadaalad lama heli karo haduusan jirin amni, Sharci lagu fulinayo qofka dambiga sameeyay iyo garsoorki fulin lahaa intaa oo isku duuban. Cadaalada waxa la dhihi karaa waa saqafkii ugu sareeyay ee sedexdaa hareenayay, waana shayga isku haya umad dhisan oo horey usocota. Maalintii lawaayo Cadaalad, sedexdaa aynu soo sheegnay mid mid bay usiibanayaan.
Guntii iyo Gabagabadii Cadalaada oo ah shayga 4aad sidaan ukala horeysiiyay iyo amniga oo ah midka ugu horeya waxa ka dhaxeeya waa xiriir wadajireed oo hal dhinac uwada socda. Midna kan kale kama maarmo waysa is dhamaystiran.
Waxaana intaa oo dhan si fudud loogu heli karaa adigoo u doorta QOFKII HABBOONAA IYO HALKUU KU HABBOONAA meelkasta.
Halku dhiga afartaasina waa Nabad iyo Nolol ahna DANTA DALKA iyo DADKA.